Kushamwaridzana neImeri Siginecha NeWiseStamp
China, May 5, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Jenn Lisak Golding
Isu tese tinoziva kuti zvakakosha kuti mabhizinesi apinze mune zvemagariro midhiya, kunyangwe zvingave nemushandirapamwe wekushambadzira, kushambadza zviitiko, kana kubloga nezve mabhenefiti ezvavanogadzira kana masevhisi. Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti vanhu vemakambani aya, vane maonero avo nepfungwa (zvinonyanya kukosha, ivo vanogona kuzvitaura), kuti vabatanidzwe uye kukurudzira hurukuro. Mushure mezvose, vanhu vanoita bhizinesi nevanhu, kwete nemabhizinesi. Mukutendeseka kose, zvakaoma kumakambani kuti abudirire kushandura vangangove vatengi kuva vatengi online, kunyangwe kana vaine simba rekudaidzira-kuita-pamwe nekambani yavo yekushambadzira. Saka ndeipi nzira iri nyore uye inoshanda kwazvo yekutanga hurukuro iyi?
Nzira yakajairika yekutungamira vashanyi kumasocial network ndeyekuisa akakodzera maficha enhau pawebhusaiti yako uye woabatanidza kune ako epamoyo kana ehunyanzvi profiles. Mushanyi anogona kana kusabaya pane ako enhau maficha, uye nekudaro, mukana mudiki wekuti vapindure / se / vatevedze yazvino tweet kana kutumira. Kana makambani mazhinji uye akawanda arikusanganisira enhau enhau munharaunda yavo yeTV kushambadza, asi vanhu vazhinji vanokanganwa zvachose nezvekutengesa kana yavo yeTV yadzoka pamhepo. Mune mamwe mazwi, vanhu vazhinji kana mabhizinesi havafambise traffic yakaringana kune yavo webhusaiti uye netiweki izvo zvinokonzeresa kuwedzera kukuru mune yavo yemagariro midhiya inotevera kana kudyidzana. Asi ndechipi chimwe chinhu chinotariswa nemunhu wese zuva nezuva chinogona kukurudzira vanhu kuti vakuwane uye vakubatanidze pane aya masocial network? Email - uye ndipo pane runako rwe WiseStamp inouya yekutamba.
Ndakazoziva nezve WiseStamp dzinenge mwedzi wapfuura pandakagamuchira email kubva kushamwari yaive nemagariro enhau pazasi pe siginecha yavo. Ndichitarisa zvakatonyanya, ndakaona kuti yairatidza yazvino tweet, yandaigona kupindura zviri nyore, kudzokorora, kana kutevera mushandisi kubva kuemail chaiko! Ini ndaifunga iyi yaive inonakidza nzira yekutanga hurukuro; kunyangwe zvirinani, zvaive nyore uye zvakatora kamwe chete kuti ndiite. WiseStamp inogona kuiswa mahara se Chrome Wedzera-on, uye iwe unogona kusanganisira ako ma profiles e Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, pamwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzevanhu. Nekudaro, chimwe chezvakanakisa pazvinhu izvi ndechekuti ndezvega - kana ndiri kutaura nemutengi kuburikidza neemail uye ivo vakaona inonakidza tweet yandakatumira, ivo vangangodaro vachazopindura kana kutevera tambo nekuti zviri nyore accesible. Iri kuwedzera kukosha kuhukama hwangu nemutengi wangu nekuti ivo vanosvika pakudzidza zvakawanda nezvangu uye vane runyoro ruzere rwehukama ruzivo kunze kweemail. Uyezve, iri kuwedzera kukosha kune yangu kambani nekuti ndiri kutumira / tweeting / kukurudzira nezve zvatiri kuita.
Bata hanya iwe nekambani yako - gadzira siginecha yeemail iyo "inoshamwaridzana" iko kutaurirana kumberi.
Nyora Bhizinesi Rako neBing Bhizinesi Portal
Kuyera, Wongororo uye Mutengi Chinangwa
May 5, 2011 pa 3: 31 PM
Ndatenda nekuongororwa kwakanaka.
Kungogadziridza zvishoma WiseStamp inoshanda neese Firefox & Chrome uye munguva pfupi ichawedzera Safari & Explorer zvakare.
May 5, 2011 pa 3: 44 PM
Josh - basa rakakura! Pamwe iwe unogona kugadzira plugin yePostbox (Mac Mutengi)! Ini ndinongozvitaura nekuti ndizvo zvandinoshandisa 🙂
May 5, 2011 pa 8: 31 PM
Kutenda nekujekeswa! Ini ndinoishandisa kuChannel, saka ndizvo zvandinonyanya kuziva. Kutenda nekupa rakakura basa.
May 5, 2011 pa 4: 18 PM
Huru posvo, Jenn! Pandakangoona email yako, ndakaida - ikozvino ini ndinongoda kumisikidza yangu kumusoro!
May 8, 2011 pa 8: 27 PM
Kutenda nekuongororwa kweWiseStamp. Ndiri kutoisa kushandisa. Ndatenda!
Gumiguru 2, 2011 na1: 17 PM
Tarisa uone brandmymail.com inopa mhinduro yakazara kune imwecheteyo dambudziko rekugadzira masiginecha ane simba nezvinyorwa zvakawanikwa kubva kune yako / yako-yekambani netiweki.
Gumiguru 2, 2011 na1: 37 PM
Wow - Brandmymail ine chairo chipo! Ndatenda nezano!
May 1, 2012 pa 8: 28 AM
Iwe unogona zvakare kushandisa BrandMyMail http://www.brandmymail.com yakafanana neestestamp asi ine zvirinani kutonga pamusoro peemaini siginecha uye yakazara template.
Mienzaniso yakanaka http://pinterest.com/brandmymailcom/brandmymail-user-templates/
May 19, 2013 pa 7: 42 PM
Kana iwe uchida kuve nekuwedzera kugadzira neako bhizinesi email siginecha, tarisa Crossware Mail siginicha